Ny mampirehitra Electric Skateboard Ny tany - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Nieritreritra koa izahay, ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra azo ampiharina foana fihenjanan'ny ny rojo fiara. Tsy ny rehetra fotsiny ireo hoverboard fa Electric hoverboards na dia manana ny mety certifications dia azo antoka ny mampiasa - izany dia ahitana ny rehetra tsara indrindra amin'ny ambony indrindra 10 hoverboards voatanisa eto ambany. Na izany aza izy ireo rehefa mandroso. Raha toa ianao mandray anjara momba ny mendrika mba tena ratsy bisikileta, ary mampiasa azy io amin'ny fomba fanampiana kely. Misy Mini Harleys, polisy môtô, ary ny mpitsangantsangana. Nahatsapa izahay dia tsy maintsy ho tsara kokoa hiatrehana ireo fomba fohy nivezivezy. Avy eo, angamba, ianao dia tsara kokoa mianatra mikasika ny zavatra tena zava-dehibe. Na fotsiny ianao dia ho any amoron'ny ranomasina ho Surf fitsapana, lohany avy ny eny-dalana vovoka, na hatrany amin'ny rihana onerous-velocity styling manodidina amin'ny manodidina, misy Koowheel Electric Skateboard mifanentana tanteraka ho anareo, sy ny fomba. Maro ny hevitra miseho loatra futuristic sarotra inoana sy ny ho hendry, fa raha ny marina io skateboard herinaratra miasa ary nivadika ho sady mahafinaritra sy mahasoa.
Tena mahafinaritra izy io, amim-pahombiazana-nanorina sy mahafinaritra ny miaina tena mangatsiaka, araka ny tokony ho-voavoatra sy mahafinaritra ny miaina! Afaka mitaingina izany isaky ny zorony ao an-tanàna. Afaka ianao mety ho voatarika amin'ny alalan'ny doka zorony mora foana ianareo mety ho takiana mba miankina fotsiny aloha na miverina mba afaka handroso na mahova. Misy endri-javatra maro toy ny Bellow:
1. Ny tonga lafatra diany fohy fitaovana avo playability.
2. maivana, voalamina tsara, azo entina, tsotra.
3. Cheap nefa mateza.
Ny Powerboard Self ny mampifandanja ny Scooter dia ho an'ny olona rehetra. Tena marina izany somary hafa tanteraka ny fitsipika 'hoverboard' tena ny mampifandanja ny môtô isika dia zatra! Topy Maso ny professionalrider hidona-tsetroka ny kodiarana aoriana, fa mafy ny sary an-tsaina dia ny amin'ny scooter.
Zava-dehibe ny haka ny ambony indrindra hitandrina ny velocity, bateria fiainana, rehefa mifandray amin'ny, freins, tendrony, fitehirizana ilaina, sy fiantohana. Tsy misy fiatoana tampoka izay mety manana ny tadio doza anao mialoha. Rehefa mandinika herinaratra scooter, skateboards no tena tsy mety amin'ny firaketana an-tsoratra voalohany. Izany no iray hafa roa kodia jiro tena voalanjalanja scooter .You dia afaka mijanona eo amboniny, ary na dia handrehitra 360 mari-pahaizana tao amin'ny toerana. Roa kodia sy milina roa no ilaina ho an'ny velocity sy ny filaminana. Izany dia zava-dehibe mba mandinika, Raha zava-matavy na matavy loatra ny olona manokana.
Post fotoana: Jan-25-2018